CONELE kongiri pombi rori - China Qingdao CONELE Group
CONELE kongiri pombi Rori iri zvinoberekwa Qingdao CONELE Group Co., Ltd., vachishandisa yemhando ruzivo kumba uye kunze uye ano yemhando kombiyuta simulation michina kuti zvakanyatsorongwa kuongorora kunetseka uye misha kuti pombi motokari mamiriro. The simba siyana parameters dzakadai dzinongoitika kakawanda pamusoro kuneta upenyu tiguu rinokurukurwa. Panguva iyoyowo, iyo hydraulic gadziriro optimized uye itsva isina mvura Michina iri wokurera kuderedza zvikuru matambudziko pombi commutation pamusoro tiguu. Tine patents vanoverengeka Optimization kuti kuwedzera mamiriro uye akaitwa hydraulic hurongwa.
The akakwana chigadzirwa unhu kudzorwa, asi consummate chigadzirwa gadzira, ari akangwarira unhu rokuongorora kunokonzera CONELE pombi motokari kusvika epamba kutungamirirwa international yepamusoro sandara, ruoko gadziriro zvose adopts simbi ndiro uye yakakwirira simba chando harikunguruswi simbi yairema, Kuzviisa simba pamusoro 1000Mpa kunovimbisa yakakwirira simba uye chiedza kurema tiguu hurongwa. 100% of maoko, makumbo uye huni Matangi vari welded kunorapwa kushushikana. Mumwe weld of tiguu gadziriro kunoedzwa 100% pasina kukuvara kana X-ray mapikicha kubvisa chero yakavanzwa zvikanganiso zvose uye kuita kuti yakasimba. Isu kugadzira sezvo yakarurama musi kuburikidza waya chaikosha kuongorora uye simba simulation kuongorora inonzi kunzwisisa marongerwo uye kwazvo chokupika ari kuwedzera hurongwa. Uye kuverenga uye kuongorora migumisiro jib mamiriro vari zvinosimbiswa neHurumende-pamwero nekuongororwa muzinda mupfungwa-kugozha bvunzo kuratidza zvibereko zvinoenderana chaiko nokushanda ezvinhu.
CONELE Group agara vakasimbirira mutengi vaifarira, vane makore akawanda yokutsvakurudza uye kukura, kugadzirwa chiitiko pombi motokari, maererano mutengi zvinodiwa, akasika zvinhu sezvo chikumbiro vatengi ', isu edzai kupa iwe kupfuura yakakodzera kuvaka zvinodiwa kuti pombi motokari, saka kuti vatengi "chete sarudza zvakanaka mumwe, hapana kudiwa dzinodhura".
Post nguva: Feb-17-2020